Ogaden News Agency (ONA) – Magaalada Naziret oo Biyo La’aan Loogu Dhamaanayo + Sababta.
Magaalada Naziret oo Biyo La’aan Loogu Dhamaanayo + Sababta.
Posted by Dulmane	/ January 10, 2017
Wararka naga soo gaadhaya magaalada Naziret (Adema) ee xarunta Gobolka Oromada ayaa sheegaya biyo la’aan ba’an oo magaalada kajirta.
Sida warku sheegayo xaalada magaalada Naziret ayaa baryihii ugu dambeeyay ahayd goob lagu kala cararay kadib markii laga waayay biyo ay isticmaalaan dadwaynuhu waxayna xaaladu umuuqataa mid kasii daraysa.
Jeergaanka biyaha ah ee 20 ka liter qaada ayaa gudaha magaalada kagaadhay 40-50 birr waxaana biyaha qaaliga ah gadan kara oo kaliya dadka taajiriinta ah halka dadka danyarta ah ay waayeen iib iyo aaqibo toona.
Xukuumada wayaanaha ayaan iyadu wax dan iyo muraad ah toona kalahayn biyo la’aanta laga soo sheegayo magaalada Naziret mana jiro wax caawimaad ah oo dhinaca gumaysiga kasoo gaadhay dadka biyo la’aantu ay saamaysay.
Dhinaca kale dadwaynaha oo aad uga soo horjeeda taliska wayaanaha ayaan wax rajo ah ka qabin ay xukuumadu caawiso waxayna dadku sheegayaan in ay xukuumadu jeclaan lahayd in ay dadku baaba’aan.
Sida aan lawada socono waxay abaaro aad udaran saameeyeen guud ahaan Itoobiya waxayna xukuumadu awoodi la’dahay in ay caawiso shacabka tabaalaysan kadib markay bangiyadii xukuumadu musalafeen lacagihii adkaana ay wadanka kabaxeen.
Sikastaba ha ahaatee waxaa abaaraha uga siidaray musuq maasuqa oo heer sare maraya iyo colaadaha dabada dheeraaday kuwaas oo maalinba maalinta xigta kasii daraya.